The 5 Basic Nzọụkwụ nke na-amalite na-ewu gị Email List | Martech Zone
The 5 Basic Nzọụkwụ nke na-amalite na-ewu gị Email List
Fraịde, Ọktọba 17, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji hụ na gị ozi nnapụta email na-anọgide na ezigbo nguzo - nke pụtara na email gị na-eme ya na igbe mbata, ọ bụghị nchekwa junk, bụ site na ịnwe usoro nchekwa na doro anya maka ịnakọta adreesị email. Ihe ọ bụla na-abụghị ụdị opt-in nke doro anya na-ekwupụta onyinye ahụ ma setịpụ atụmanya na ndebanye aha (gosipụtara ikike ekwuputara na) nwere ike imetụta ndị o kwere omume na onye nnata nwere ike pịa bọtịnụ SPAM. Ma mgbe ha mere, ọ nwere ike imetụta ike gị iji nweta ozi ịntanetị na igbe mbata ndị ọzọ niile debanyere aha gị.
O nwere ike iyi ka iwulite ndepụta ịpụ apụ site na ncha bụ ọrụ kachasị dọọ mmadụ ọ bụla, mana ọ dị ezigbo mkpa. Mgbe iwulite ihe ndepụta n'ụzọ ziri ezi, ị ga-enwe ndị na-ege gị ntị ga-anụ ihe ị ga-ekwu. Nke a bụ usoro 5 dị mfe dị mfe bụ isi usoro nke iwuli ndepụta ndị debanyere aha na-eguzosi ike n'ihe. Gụọ isiokwu zuru ezu Ebe a.
E nyefere Email bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịnyefe ihe. Anyị ekekọrịtala ọtụtụ ozi gbasara nnweta ebe a Martech Zone - Gbalia lelee nke anyi haziri nzukọ na 250ok ma ọ bụrụ na ị ga-amasị a zuru ezu toolset-enyere gị aka dị ka nke ọma! Nke a bụ usoro ntọala siri ike nke 5 kwesịrị ịbụ ntọala nke weebụsaịtị na azụmaahịa ịntanetị ọ bụla - ikike ị nwere ike ịhọrọ ndị debanyere aha ndị ị nwere ike ịkpọtụrụ ugboro ugboro na ebumnuche nke ịzụlite mmekọrịta azụmaahịa n'ọdịnihu.
Igodo nke ịmalite Malite Ndepụta Email Gị
Isi okwu dị na nbanye gị kwesịrị ịbụ ịchọpụta ihe na-akụda olile anya gị, nye ha ihe iji dozie nsogbu ahụ wee nyefee ezigbo uru site na mmemme email gị ka ị nwee ike ịga n'ihu na-eme mmekọrịta ahụ.
Chọpụta ihe ha choro ma rapu ha ka ha banye na ahia… ndenye aha ha maka ihe oma.
Mepụta peeji ọdịda na nkenke isi na onyinye.
tinye ụdị nke ga-anakọta adreesị ozi-e ha na ozi ndị ọzọ.
ule gị ụdị! Anyị na-arụ ọrụ na otutu ahịa onye na-anwale ha ụdị externally… ha na-agbajikwa!
Chọọ okporo ụzọ ma soro mgbanwe gị iji chọpụta uru ndị debanyere aha gị na ọnụego mgbanwe ha.
Otu n'ọnụ na esetịpụ ezi… adịghị nnọọ na-enye gị goodie site n'ụdị nrubeisi. Jide n'aka kpaliri ozi ọma, n'ụzọ ahụ ị ga - ahụ na onye ahụ jiri adreesị ozi-e dị irè! Ozugbo ị mmemme email nwere ihe ndị bụ isi, lee Wayszọ 15 na-eto eto ndepụta email gị!
Tags: ndepụta emailemail opt-inemail ịdenye ahaemail ịdenye aha ụdịemail debanyere ahaeto ndepụta email gịtoo ndepụta gịtoo gị subscriber ndepụtadenye aha na omume kacha mmaụdị ndebanye ahadebanyere aha ndepụta
Ebumnuche mere Onye isi oche gị kwesịrị iji Na Social Media